Atụmatụ 5 maka ide obere akụkọ | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
La obere akwukwo ọ dịla adị. Agbanyeghị, ọ bụbeghị afọ ole na ole gara aga ka, site na netwọkụ mmekọrịta, ụdị ndị dị ka micro-story akpọtela maka oge ọhụụ ọhụụ. Achịkọtara akụkọ na otu amaokwu abụọ ma ọ bụ mepee ụzọ ọhụụ maka akwụkwọ ọgụgụ ndị na-agụ onye na-agụ ya. Ọzọkwa na aesthetic na-agba mbọ na-akpali a ụfọdụ ihe omimi ma, karịa ihe niile, ime ka mmetụta. Ọ bụrụ n’itinye ihe ndị a Atụmatụ 5 maka ide obere akụkọ, mmeri ga-emesi obi ike.
1 Dị nkenke
2 Kọọ otu ọnọdụ
3 Jiri ellipsis
4 Jiri okwu kpọọ
5 A ọma aha
Dị ka aha ya na-egosi, akụkọ mkpirisi na-achọ mkpirisi ka ukwuu karịa akụkọ ahụ. Ọ bụ ezie na usoro nke ụdị dị iche iche abụrụla nke nwere ike ịkọwapụta oge (yana akụkọ gbasara ọtụtụ paragraf), ọdịdị nke obere akụkọ bụ gwa akuko di mkpirikpi dika o kwere mee.
Kọọ otu ọnọdụ
Site n'uche gị gbanahụ mbara ụwa nke nkwa na amụma efu bi na mkpochapụ ya. #LettersofYemh
Akwukwo nke Yineisy Mota (@yemh) kesara na Aug 31, 2017 na 2: 42am PDT
Ejiri ihe omuma a gbue echiche ma gbakwunye ya na ndi ozo ndi ozo, ebe akuko ahu na-achogharia onodu. Ọ bụrụ na akwụkwọ akụkọ ahụ na-akọ ogologo ndụ nwata nwoke chọrọ ịbụ onye na-agụ kpakpando ruo mgbe ọ ruru ọnwa, akụkọ ahụ ga-ekpuchi oge mgbe ọ bịarutere, ma ọ bụ mgbe ọ kpebiri ịgbaga na kpakpando. Micro-akụkọ na-emezu otu ọrụ dị ka akụkọ, ma jiri obere okwu. Ọ bụ ihe kọọrọ gị otu ọnọdụ n'emeghị ka ọ pụta ìhè.
Ellipsis bụ onye na-ekwu okwu nke nwere iwepụ okwu sitere na ederede na, n'onwe ha, ghọtara. Onye mmekorita di nkpa mgbe o biara igota akuko miri emi n'ime amaokwu ole na ole. Micro-akụkọ na-eji aghụghọ, jigide otu ihe omimi site na akụkọ nke na-achikọta ihe bụ isi nke akụkọ ahụ, na-aga na njedebe ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mkpụrụ edemede abụọ na-alaghachi ma na-agbaji ruo oge ndụ niile iji mechaa ghọta na ha hụrụ ibe ha n'anya, "Mgbe ọtụtụ agbụ na ịtọghe, eriri ahụ siri ike" ga-ezu. Ọmụmaatụ.
Jiri okwu kpọọ
«Ajuar» by @albertopiernas Anyị mere ngaji na akwa. Mgbe m tetara, m laghachi ịbụ anụ na gị mma. Edere akụkọ a na weebụsaịtị anyị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka anyị bipụta otu nke gị: Zitere anyị ya na http://www.microcott.es
A post nke microuenta.es (@ microuenta.es) na Sep 1, 2017 na 1: 02pm PDT
Ọ nwere ike ịbụ na ị na-achọ ide akụkọ banyere iwe iwe ma ọ na-esiri gị ike ịchọta okwu dị na akụkọ ahụ nke chịkọtara ya. N'ihi nke a, ma ọ bụ na nke m, enwere m ike iwepụta onyonyo, nke na - akpali ihe ndị ọzọ ọdịnaya n'onwe ya: mmetụta dị a doesaa ka ihe oyiyi ahụ na - akpali n'ime gị? Kedu akụkọ ihe mere eme n'ime ya? Oge ndi ozo, otu okwu nwere ike zuru ezu iji dọta ndi ozo site na iji wuo ederede. Dịka ọmụmaatụ, "ọkụ" na-adọta okwu dịka "ọkụ ọkụ", "ọchịchịrị", "anyanwụ" ... Gwuo ha niile egwu, n'ihi na nke mbụ, obere akụkọ na-anabata ndị ọzọ.
A ọma aha
Chọta aha zuru oke maka ọrụ anyị na-ewepụtakarịrị anyị karịa ide obere akụkọ n'onwe ya. Agbanyeghị, ọtụtụ oge aha ahụ nwere ike imeju akụkọ ahụ site na ịtinyekwu uru ma ọ bụ, ọbụna, mezue ihe ọ pụtara. Dịka ọmụmaatụ, ọmarịcha "Curfew."
Na-amaja ịzụta micro-akụkọ na anyị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Atụmatụ 5 maka ide obere akụkọ
Afọ iri asaa na ise nke ise, ụmụaka saga nke Enid Blyton